musha Kanadha Singers Shawn Mendes Yevacheche Nyaya yeNhau uye Untold Biography Chokwadi
CB inopa Nyaya Yakazara yeCanada Celeb ane zita rekuti “Shawnito". Yedu Shawn Mendes Yevacheche Nyaya uye Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa ezviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Ehe, munhu wese anoziva nezve ake acoustic-inotyairwa uye inonakidza nziyo. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Shawn Mendes 'biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Shawn Mendes Yekutanga Upenyu uye Mhuri Yemashure:
Kutanga kubva, Shawn Peter Raul Mendes akaberekwa pazuva re8th raAugust 1998 muToronto, Ontario, Canada. Iye aive wekutanga pavana vaviri akazvarwa kuna mai vake, Karen Mendes uye kuna baba vake, Manuel Mendes.
Nyika yeCanada yerudzi chena ine chirungu nemidzi yechiPutukezi yakakurira mudhorobha reToronto rePickering muOntario kwaakakurira pamwe chete nehanzvadzi yake diki - Aaliyah Mendes.
Kukura mumusha, vabereki vaShawn vaive vaviri vaida mimhanzi vakaroora vaifarira kuteerera kumhando dzakasiyana dzehunyanzvi.
Kuva apuro iro risina kuwira kure nemuti, Shawn akanongedza mukuda kwevabereki vake uye akazendamira zvakanyanya pakuteerera nyika pamwe nemumhanzi weReggae.
Shawn Mendes Dzidzo uye Basa Rekuvaka:
Panguva iyo Shawn aive nemakore gumi nematatu ekuberekwa, akatora kufarira mimhanzi padanho rinotevera nekudzidza kuridza gitare kuburikidza nemavhidhiyo tutorials paYouTube.
Iko kusimudzira hakuna kungomuratidzira iye sechigadziro chemoto asi mudzidzi anokurumidza sezvo akazova gitare akanaka mukati megore.
Kure nemimhanzi, Shawn aive nezvido mune zvimwe zvinhu zvehunyanzvi kunyanya kuita. Nekudaro, nechido akatora zvidzidzo mukati mezvidzidzo zvake kuPine Ridge Secondary School paPuteri uye akabatanidzwawo mumitambo yechikoro chepamusoro senge ice hockey uye nhabvu kusvika pakupedza kwake ku2016.
Shawn Mendes Yekutanga Yehupenyu Hupenyu:
Shawn anga achiri mudzidzi wePine Ridge Sekondari paakatanga kugadzira nziyo dzinozivikanwa ndokutsvaga pachikuva paaigona kugovera icho chaaitenda kuti yaive tarenda rake pasirese.
Izvo hazvina kutora nguva refu mimhanzi isati yagumburwa paVine (pfupi-fomu vhidhiyo yekubata service) mumwedzi waAugust 2012. Akarongedza vhidhiyo yake achiimba Justin Bieber's "Chero uchindida"- acoustic maitiro.
Shawn Mendes Biography - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira Nhau:
Shawn's rendition ya Justin Bieber's "Chero Chero Iwe Uchindida" paVine yakave ndiyo nguva yake yekuchinja mukurumbira sezvo iye haana kuwana mashoma pane zviuru gumi zvekuda uye vateveri vazhinji zuva raitevera.
Mushure meizvozvo, vateveri vake papuratifomu vakawedzera mumeteoric chiyero pamwe nekuburitswa kwake kwedzimwe nziyo dzekuvhara.
Sezvo tarenda raShawn rakakonzera mukurumbira pasocial media richikura, akawanikwa nemaneja weartist - Andrew Gertler - uyo akakurumidza kumuzivisa kuRechep Records muna Ndira 2014.
Asati asaina kurekodha muna Chivabvu 2014, Shawn akapinda mumakwikwi aRyan Seacrest e "Yakanakisa Rwiyo Rwiyo" kwaakazobuda mukundi wekuimba "Taura Chimwe Chinhu" neRimwe Nyika Huru.
Shawn Mendes Bio - Kumuka Kune Mukurumbira Nhau:
2015 raive gore iro Shawn akazopedzisira aburitsa dambarefu rake reti studio 'Ruoko Rwakanyorwa' (2015) mushure mekurekodha kubudirira nekuburitswa kwake kwekutanga asina kuroorwa "Hupenyu hweParty" uye huru yekutanga EP mu2014.
'Akanyorwa nemaoko' akaenderera mberi kuenda kunhamba yekutanga paBillboard 200 uyezve akaita Shawn muridzi mudiki mutambi kutanga panhamba yekutanga kubva kuburitswa kwa Justin bieberNyika Yangu 2.0.
Kukurumidza kusvika parizvino Shawn muimbi akazara ane mimhanzi nyeredzi ane humwe hunowedzerwa iye discography yake inozvinyudza zita rezita "Shawn Mendes" (2018). mamwe, sezvavanotaura, inhoroondo.
Shawn Mendes Hukama Hupenyu:
Shawn Mendes haana kuroora panguva yekunyora. Tinokuunzira chokwadi nezve yake yekufambidzana nhoroondo uye yazvino hukama chinzvimbo.
Kutanga nenhoroondo yake yekufambidzana, Shawn haazivikanwe kuti akambofambidzana chero mukadzi asati amuka kuva nemukurumbira.
Kunyangwe hazvo muimbi anga akabatanidzwa nevakadzi vakaita semuimbi Camilla Cabello naHailey Baldwin.
Iye haana kuroora panguva yekunyora uye haanzwe kudiwa kwekuve muhukama. Kana iye haana mwanakomana (s) kana mwanasikana (s) kunze kwemuchato panguva yekunyora.
Shawn Mendes Hupenyu hwemhuri:
Shawn Mendes anobva kumhuri yepakati-yemhuri kumashure. Tinokuunzira chokwadi nezvehupenyu hwemhuri yake.
Nezve baba vaShawn Mendes:
Manuel Mendes ndibaba vaShawn. Iye muzvinabhizinesi ane zvido mukutengesa zvekudya muresitorendi nekutarisira mabhawa.
Wenyika yePortugal uye baba vevaviri anga achitsigira Shawn uyo waakakurudzira kuti achinje kubva mukushandura kunyora nziyo iye.
Iyo yepedyo kemisitiri pakati paManuel naShawn inonzwisisika nenzira iyo iyo yekutanga yaigovana mafoto emuimbi pasocial media.
Nezve amai vaShawn Mendes:
Karen Mendes ndiamai vaShawn. Iye wedzinza reChirungu uye anoshanda seye real estate mumiriri panguva yekunyora. Karen anogovera hukama hwepedyo naShawn kuti ivo vese vane matatto enzou enjuzu paminwe yavo.
Nezve Shawn Mendes 'vanun'una:
Shawn haana hama asi hanzvadzi diki inozivikanwa saAaliyah Mendes. Anogovana hwakafanana hupenyu hwepakutanga uye nyaya yehucheche naShawn kusanganisira kuve mukurumbira paVine.
Munin'ina wemunun'una ane vateveri vakakura uye kunyorera paYouTube, Instagram uye Twitter anoshuvira kuve muimbi uye ane izvo zvinotora kuzadzisa zviroto zvake.
About Shawn Mendes hama:
Kure kure nemhuri yaShawn, vanambuya vake nababa vake ndiAvó Mendes naSuzanne Rayment. Ivo baba vake baba vanozivikanwa saPeter G.
Rayment nepo zvisiri zvakawanda zvinozivikanwa pamusoro pasekuru vake amai. Saizvozvo, hapana zvinyorwa zveababamunini vaShawn, vanatete, babamunini uye babamunini. Kana hama dzake hadzina kuzivikanwa muzviitiko zvine mukurumbira zveupenyu hwake hwepakutanga kusvika nhasi.
Shawn Mendes Hupenyu hweMunhu:
Chii chinoita kuti Shawn Mendes afunge? Gara kumashure apo isu tinokuunzira magariro ehunhu hwake kuti akubatsire iwe kuti utore mufananidzo wake. Kutanga ne, Shawn's persona isanganiswa ye Leo zodiac maitiro.
Iye ane charismatic, anesimba, ane tarisiro uye akazaruka pakufumura chokwadi pamusoro pehupenyu hwake hwega uye hwakavanzika. Ane zvishoma zvaanofarira uye zvekuseredza zvinosanganisira kutamba gitare, kutamba Xbox, kudya, kutandara neshamwari, kuenda kumitambo yekutamba nekutamba ice hockey.
Shawn Mendes Mararamiro:
Shawn Mende's ane huwandu hunofungidzirwa hwemadhora 12 Million panguva yekunyora. Kwakatangira hupfumi hwaShawn kwakanyanya kunobva pamimhanzi yake yekuridza uye dhizaina dhizaini mukuwongorora maitiro ake ekushandisa mari kunoratidza kuti anosiya hupenyu hwoumbozha.
Kunongedzera zvinongedzo kumararamiro akadaro zvinosanganisira imba yake kuToronto iyo ine yakanakisa dhizaini ine maficha akaita sekushambira, girazi rakasviba uye kupenya kwemukati kwakanaka
Kunyangwe muimbi asina kuburitsa mutengo weimba, zvinopera pasina kutaura kuti zvataurwa pamusoro zvinouya nemutengo mukuru.
Humwe hupfumi hunotaura zvakanaka nezve hupenyu hwoumbozha hwaShawn ndeyekutora kwake mota dzinozvirumbidza nezvevatasva zvekunze seFord Mustang GT naJeep Wrangler.
Shawn Mendes Untold Chokwadi:
Kuputira yedu Shawn Mendes yehucheche nyaya uye biography pano pane chokwadi chisingawanzo kuverengerwa mubio rake.
Shawn Mendes haana dambudziko nedoro uye akataura kamwe rudo rwake pakuputa mu2018.
Ane akati wandei ma tattoos. Akakurumbira pakati pehunyanzvi hwemuviri gitare rakagadzirwa nemiti paruoko rwake rwepasi, shiri paruoko rwake pamwe neyebhenji rakazadzwa nemaruva paruoko rwake rwekuruboshwe.
Nezve chitendero chake, Shawn akarerwa nemhuri yechitendero chechiKristu. Kunyangwe chinamato chinonamatwa nemuimbi uyu chisinga zive panguva yekunyora, anenge akavhurika nezvekutenda kwake uye anoti anotenda muna Mwari mumwechete wechokwadi.
Muimbi anotambura nechirwere chekurapa chinozivikanwa seicho chine usimbe kana 'Amblyopia'. iwo mamiriro anokonzeresa disco-kusarudzwa pakati peziso nehuropi zvekuti ziso rimwe rinofamba zvishoma kana munhu achiona mune imwe nzira. Izvi zvinotungamira kukudzikira kwekuona mune iro ziso rinofamba zvishoma.
Iye anoshingairira kuita nerunyararo uye ane huwandu hwerudo kuedza kune chikwereti chake.
Thanks for reading vedu Shawn Mendes Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At childhood biography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!